Zostrix (ဇိုစထရစ်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Dr. Zin Wai Yan Lin မှ ရေးသားသည်။ 19/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Zostrix (ဇိုစထရစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Zostrix® ကို ကြွက်သား နှင့် အဆစ် နာကျင်ခြင်းအား သက်သာစေရန် သုံးသည်။ ဆီးချိုသွေးချိုကြောင့် အာရုံကြော နာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေရန်လည်း သုံးသည်။ ၎င်းကို အခြား အကြောင်းရင်းများ အတွက်လည်း သုံးနိုင်သည်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Zostrix (ဇိုစထရစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သုံးပါ။ ပေးထားသော အချက်အလက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုပါ။ လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို သေချာ လိုက်နာပါ။
Zostrix® ကို ပါးစပ်မှ မသောက်ပါနှင့်။ အရေပြားပေါ် တွင်သာ သုံးပါ။ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း နှင့် မျက်လုံးအား မထိပါစေနှင့် ( လောင်ကျွမ်းနိုင်သည်)။
ထိခိုက်သော နေရာကို ဆေးမလိမ်းခင် သန့်ရှင်းအောင် လုပ်ပါ။ ကောင်းစွာ ခြောက်သွေ့အောင် လုပ်ပါ။
ဆေးလိမ်းသောအခါ လက်အိတ် စွပ်နိုင်သည်။
ကျိန်းစပ်သော အရေပြားပေါ်တွင် မလိမ်းပါနှင့်။
ပြတ်ရာ၊ ခြစ်ရာ သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော အရေပြားပေါ်တွင် မလိမ်းပါနှင့်။
ဆေးလိမ်းပြီးပြီးချင်း ရေမချိုးပါနှင့်။ ရေမကူးပါနှင့်။
မျက်လုံးထဲသို့ ဤဆေး ဝင်သွားပါက ရေအေးဖြင့် ဆေးပါ။
ဆေးမလိမ်းခင်နှင့် ဆေးလိမ်းအပြီးတွင် လက်ကို ရေဆေးပါ။ ဤဆေးကို လက်ပေါ်တွင် လိမ်းပါက လက်ကို ရေမဆေးပါနှင့်။
ထိခိုက်သော အရေပြားပေါ်တွင် ပါးပါးလိမ်းပြီး ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။
Zostrix® ကို လက်တွင် လိမ်းပါက ဆေးလိမ်းပြီးနောက် မိနစ် ၃၀ အတွင်း လက်ကို ရေမဆေးပါနှင့်။ ရေ မဆေးရမချင်း မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ လိင်အင်္ဂါများ၊ ကျိန်းစပ်သော အရေပြား သို့မဟုတ် မျက်ကပ်မှန်ကို မထိပါနှင့်။
Zostrix (ဇိုစထရစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Zostrix® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Zostrix® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ Zostrix® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Zostrix® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Zostrix (ဇိုစထရစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်သည် Zostrix® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
သင်သည် Zostrix® သုံးနေကြောင်းကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသူအားလုံးကို ပြောပြပါ။ ၎င်းတွင် ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သွားဆရာဝန်များ ပါဝင်သည်။
ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားမထားပါက ပတ်တီးများ မသုံးပါနှင့်။
ဤဆေးကို မျိုချမိပါက အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဆေးကို မျိုချမိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အဆိပ် ထိန်းချုပ်မှု စင်တာကို ချက်ချင်း ခေါ်ပါ။
အပူရင်းမြစ်များ ( ဥပမာ နေရောင်ကဲ့သို့ အလင်းထွက်သော မီးအိမ်၊ အသားညိုစေသော အိပ်ယာများ၊ အပူပေးသော အချပ်များ၊ လျှပ်စစ်စောင်များ၊ အပူပေးသော မီးအိမ်၊ ရေနွေးချိုးခန်း၊ အပူပေးထားသော ရေမွေ့ယာ) ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အချိန်ကြာစွာ ရေနွေးဖြင့် ရေချိုးခြင်း၊ နေပူစာ လှုံခြင်းကို ရှောင်ပါ။ သင်၏ အပူချိန်သည် မြင့်တက်လာပြီး သင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲသို့ ဆေးများ အလွန်အကျွံ ဝင်သွားနိုင်သည်။
အလွန်ဆိုးရွားသော ပူလောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း ဖြစ်လာပါက Zostrix® ကို အရေပြားပေါ်မှ ဖယ်ရှားပါ။
အရေပြား၏ နေရာ အများအပြားကို လိမ်းပါက ဂရုစိုက်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးသည် ခြောက်သွားပါက ဆေးကို ရှူမကြည့်ပါနှင့်။ နှာခေါင်း သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤဆေး အချို့သည် မီးလောင်နိုင်သည်။ မီးတောက် အနီးတွင် မသုံးပါနှင့်။ ဆေးလိပ်သောက်နေစဉ် မသုံးပါနှင့်။
သင်သည် ကိုယ်ဝန်ရှိပါက သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် စီစဉ်ထားပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် Zostrix® သုံးခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သည်။
သင်သည် ကလေးနို့တိုက်နေပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။ သင့်ကလေးအပေါ် ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များကို ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Zostrix (ဇိုစထရစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Zostrix® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Zostrix® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။ Zostrix® သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် သတ်မှတ်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
Zostrix (ဇိုစထရစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
သင့်တွင် အောက်ပါ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းပြောပါ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေး အကူအညီ ချက်ချင်း ရယူပါ။ အောက်ပါ လက္ခဏာများသည် အလွန်ဆိုးရွားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ဆက်စပ် နိုင်သည်။
ဓါတ်မတည့်မှု၏ လက္ခဏာများ။ အဖုအပိမ့်များ၊ အင်ပျဉ်၊ ယားယံခြင်း၊ အရေပြား နီရဲပြီး ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဖောင်းကြွခြင်း၊ အလွှာလိုက် ကွာခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ အသက်ရှူရာတွင် တဝီဝီမြည်ခြင်း၊ ရင်ဘတ် သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူရ ခက်ခြင်း၊ စကားပြောရ ခက်ခြင်း၊ ပုံမမှန်သော အသံအက်ကွဲခြင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း။
အလွန်ဆိုးရွားသော အရေပြား ကျိန်းစပ်ခြင်း
အလွန်ဆိုးရွားသော ပူလောင်ခြင်း၊ ပျောက်မသွားသော ပူလောင်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Zostrix (ဇိုစထရစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zostrix® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Zostrix (ဇိုစထရစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Zostrix® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Zostrix (ဇိုစထရစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zostrix® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Zostrix (ဇိုစထရစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
နာကျင်ခြင်းအတွက် ပုံမှန် လူကြီး ပမာဏ
ထိခိုက်သော နေရာကို ပါးပါး လိမ်းပေးပါ။ တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်မှ လေးကြိမ် လိမ်းပေးပါ။ ကောင်းစွာ စုပ်ယူစေရန် ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။
အသုံးပြုမှုများ။ ကြွက်သားနှင့် အဆစ်များ အသေးစား ကိုက်ခဲမှု၊ နာကျင်မှု။ အားစိုက်ခြင်း၊ တင်းခြင်း၊ အညိုမည်း စွဲခြင်း၊ အဆစ်ရောင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Zostrix (ဇိုစထရစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာ များအတွက် ဆေးညွှန်းမှာ အတိအကျ မရှိသေးပါ။ ကလေးများအတွက် စိတ်မချရပါ။ အသုံးမပြုခင် ဆေး၏ ဘေးကင်းမှုကို အပြည့်နားလည်ရန် အရေးကြီးသည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Zostrix (ဇိုစထရစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Zostrix® ကို အောက်ပါပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
Zostrix® လိမ်းရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် လိမ်းပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် လိမ်းရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လိမ်းပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မလိမ်းပါနှင့်။
Zostrix®.https://www.drugs.com/cdi/zostrix-capsaicin-cream-gel-liquid-and-lotion.html#. Accessed November 16, 2017
Zostrix®.https://www.webmd.com/drugs/2/drug-11201/zostrix-topical/details. Accessed November 16, 2017